ILanyard Factory-China Lanyard Manufacturers and Suppliers
Enkosi kwinkxaso yeefektri ezinendawo yokuvelisa ngaphezulu kwe-64,000 yeemitha zesikwere kunye nabasebenzi abangaphezu kwama-2500 abanamava kunye neplanti ye-electroplating yamva nje kunye noomatshini bokukhupha umbala othambileyo we-enamel, siyabodlula abo sikhuphisana nabo ngokusebenza okuphezulu, ingcali, ukunyaniseka kunye nomgangatho wemveliso ogqwesileyo, ngakumbi inani elikhulu elifunekayo kungekudala okanye uyilo oluntsonkothileyo olufuna abasebenzi abanamava.Uzinikele kulawulo olungqongqo lomgangatho kunye nenkonzo yabathengi ecingayo, abasebenzi bethu abanamava bahlala befumaneka ukuxoxa ngeemfuno zakho kunye nokuqinisekisa ukwaneliseka okupheleleyo kwabathengi.
ILanyards yenye yeengqokelela zethu eziphambili, iba yinto ethandwayo kumthengi wethu ukukhetha ukubonisa uphawu lwabo, uphawu ngexesha lenkomfa, iiklabhu, imisebenzi yangaphandle. Iilanya zeelanya zinokubonelelwa ngezinto ezahlukeneyo ezifana nepolyester, ukufudumeza ubushushu, ilukiweyo, inayiloni njalo njalo. Ngaphandle kwelanyadi eziqhelekileyo, inokubonelela ngokusetyenziswa okukhethekileyo kweelayadi ezifana nelanyada ze-LED, iileyile ezikhanyayo, iileyile zokubamba iibhotile, imitya yekhamera njalo njalo. kwi.Iimathiriyeli ezahlukeneyo, izincedisi zinika imisebenzi eyahlukeneyo yelanyards.Nokuba yeyiphi na imeko ongathanda ukuyisebenzisa, inokuzifumana iilayadi ezifanelekileyo. Iqela lethu lokuthengisa linokubonelela ngeengcebiso zobuchwephesha ngokwesicelo sakho.
Umtya oMfutshane kunye neCarabiner
I-Bling bling i-Rhinestone lanyards
Imitya yemithwalo kunye neebhanti zemithwalo
Izacholo zokusinda kunye neeparacords
Iintambo zeFowuni / Iselfowuni yefowuni yefowuni / iSelfowuni ...
Iintambo zeenja kunye neeKhola
IiLanyards zePolyester eziprintiweyo kwiSilkscreen